Wararka Maanta: Isniin, Oct 11, 2021-Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika oo taageeray qorshe lagu ballaarinayo howlgalka Amisom ee Soomaaliya
Howlgalkan ayaa ah in wixii ka dambeeya 2021 howlgalka Amisom lagu wareegiyo Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay oo wadajir ah. Ama in Soomaaliya la geeyo ciidamada heeganka ah ee Bariga Afrika.
Qorshahan oo horey ugasoo baxay guddiga Qiimaynta Madaxa Bannaan ee Midowga Afrika, ayaa u baahnaan doona oggolaanshaha golaha ammaanka Qaramada Midoobay (UNSC), si loo ballaariyo waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya.
Cutubka VII ee Axdiga Qaramada Midoobay wuxuu qeexayaa awoodda Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ilaalinta nabadda.
Wuxuu u oggolaanayaa Golaha inay go'aamiyaan jiritaanka wax kasta oo khatar ku ah nabadda, jebinta nabadda, ama ficilogardaro ah iyo inay qaadaan tallaabo milatari iyo mid aan milatari ahayn si dib loogu soo celiyo nabadda iyo amniga caalamiga ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay uga soo horjeesatay qorshahan.